Zithini izizathu zokudityaniswa kwe-rosin kwinkqubo ye-chip ye-SMT?
Ilungu le-Rosin elibangelwa ziinkqubo zenkqubo. Idibeneyo yeRosin ebangelwa yimibandela ye-PCB 1. Iipads zePCB zixutywe kwaye zinokuthengiswa okungalunganga ...
Impembelelo yetekhnoloji yonyango yomphezulu we-PCB kumgangatho we-welding
Unyango lomphezulu we-PCB sisitshixo kunye nesiseko somgangatho wepatch ye-SMT. Inkqubo yonyango yale khonkco ikakhulu ibandakanya la manqaku alandelayo. Namhlanje, ndiza kwabelana ngamava kwibhodi yesekethe yobungqina kunye nawe: (1) Ngaphandle kwe-ENG, ubukhulu be ...
Ngaba umenzi weekhamera zokwazisa ubuso ulunge kangakanani ekusebenziseni obu buchwephesha?
Ikhamera yokuqonda ubuso isebenzisa itekhnoloji ye-biometric esekwe kulwazi lobuso, isebenzisa ikhamera okanye ividiyo yevidiyo ukuqokelela imifanekiso okanye imijelo yevidiyo equkethe ubuso bomntu, ibhaqe ngokuzenzekelayo kwaye ilandele ubuso bomntu kwimifanekiso, emva koko yenze ubuso bokubona ...
Kubaluleke kangakanani ukuyilwa kwePCB kwinkqubo yokunyuka kwe-SMT?
Kuqala siza kucacisa ngesihloko sethu, Oko kukuthi, kubaluleke kangakanani uyilo lwe-PCB kwinkqubo ye-SMT patch. Ngokunxulumene nomxholo esiye sawuhlalutya ngaphambili, sinokufumanisa ukuba uninzi lweengxaki zomgangatho kwi-SMT zihambelana ngqo neengxaki zenkqubo yokuphela komphambili. Kufana nje ...
Uluhlu lwesicelo semodyuli yekhamera ye-binocular
Ibhodi yomthombo ovulekileyo yeFirefly RK3399 ine-interface ye-MIPI yekhamera, kunye ne-RK3399 chip ine-ISP yejelo ezimbini, ezinokuqokelela imiqondiso emibini yemifanekiso ngaxeshanye, kwaye idatha yamajelo amabini izimele ngokupheleleyo kwaye iyafana. Ingasetyenziswa kumbono we-stereo we-binocular, i-VR kunye nezinye ...